Plywood loogu talagalay Campervans iyo Caravans
Birly Plywood buuxa
LVL Albaabka Koowaad
Waa maxay faraqa u dhexeeya Marine Plywood iyo Structural Plywood?
Plywood-ka Xariiqa 'Glue Line Marine plywood' wuxuu leeyahay nooc joogto ah A phenolic bond Dhismaha plywood wuxuu leeyahay nooc joogto ah A bond phenolic bonds Noocyada Xawaaraha Noocyada Maraakiibta plywood-ka waxaa laga samayn karaa alwaax loo xushay cufnaantiisa, foorarsiga xooggiisa, fudeydkiisa, sifooyinka dhammaystirka dusha sare & saamaynta iska caabin Structur ...
Plywood Fasalka Marinka – Plywood Biyo La'aan
HW Marine Grade Plywood waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu waxtarka badan ee plywood. Waxay ka samaysan tahay Douglas fir, taasoo ka dhigaysa mid aad u fudud laakiin aad u xoog badan oo waara. Marawaxadda Maraakiibta ee loo yaqaan 'Plywood Plywood' waxay leedahay qoob-ka-biyood aan biyuhu kajirin oo isku wada haya cajaladaha. Maraakiibta maraakiibta ee loo yaqaan 'plywood' waxay aqbashaa biyo-soo-gelinta finnishka ee laga soo dhoofiyo waddanka ...
HW PINE CDX QAADASHADA FASALKA AAN SHAQAALAHA ahayn
Pinewood-keena PX-ka-aan-dhisnayn ee Pine-ka waxaa laga soo saaray dhirta geedaha geedaha ugu fiican (isha dib-u-cusboonaysiinta) ee Shiinaha, iyadoo laga faa'iideysanayo tayada sare ee geedaha geedaha ee laba darajo oo gaar ah "C" iyo "D". "C" veneer fasalka "C" wuxuu waafaqsan yahay "C" heerka astaanta shaashadda ee Australia. (Sanded oo buuxa) Aan-per ...
Sida Loo Xulo Plywoodka Si Loogu Kordhiyo Karavan
Plywood waxaa badanaa lagu amaanaa waxtarkiisa iyo awooda la qabsiga noocyo kala duwan oo codsiyo kala duwan ah. Mid ka mid ah adeegsiga ugu caamsan ee laga yaabo in dad badani aysan ka fekerin markay maqlaan erayga "plywood" waa safro ku habboon. Plywood wuxuu ahaa xulasho caan ah oo loogu talagalay warshadaha gawaarida loogu talagalay ...
Waa maxay guddi ku saleysan alwaax bilaash ah formaldehyde? Sidee loo doortaa guddi alwaax bilaash ah oo loo yaqaan 'formaldehyde'?
Waa maxay guddi ku saleysan alwaax bilaash ah formaldehyde? Sidee loo doortaa guddi alwaax bilaash ah oo loo yaqaan 'formaldehyde'? Iyada oo dareenka sii kordhaya ee loo yaqaan 'formaldehyde' iyo ilaalinta deegaanka ee suuqa, shirkadaha horseedka u ah warshadaha alaabta guryaha ee loo yaqaan 'formaldehyde wo' iyo jawi saaxiibtinimo wo ...
Plywood-ka ugu Fiican Campervans iyo Caravans
In kasta oo warshado badan ay dhibaato la soo dersayeen dhawaanahan xaddidaadyo cusub oo la xiriira safarka iyo isu imaatinka bulsheed waxaa jira hal meel oo weli ku sii siqaatay xerooyinka iyo gawaarida. Iyada oo safarada ugu badan ee caalamku ay ka baxsan yihiin miiska mustaqbalka dhow iyo dhaqaalaha maxalliga ah ee quusta ...
PLYWOOD SHAQO LEH, OO KU DARSAN DHISMAYAASHA mootooyinka
Shuruudaha suuqa mootada ayaa la mid ah kuwa warshadaha doomaha; macmiilku wuxuu u arkaa caravan ama mootada inuu yahay gurigiisa labaad, waana sababta ay muhiim u tahay in la bixiyo qurxin diiran oo casri ah oo gudaha ah si loo helo raaxada ugu fiican. Plywood-ka gudaha laga sameeyay ayaa u oggolaanaya ...
Plywood vs Particleboard: Keebaa Fiican?
Guud ahaan, dadka badankood waxay u badan tahay inay soo gabagabeeyaan haddii aad ku dhejiso plywood vs particleboard, kii hore ayaa guuleysan lahaa. Si kastaba ha noqotee, walxaha 'patleboard', maaha iyada oo aan lahayn faa'iidooyin u gaar ah oo ka sarreeya plywood. Aynu eegno farqiga u dhexeeya plywood iyo particleboard, oo aan ogaanno midka ku guuleysan doona plywood ...
Sidee loo kala saaraa tayada plywood?
Qodobbada soo socda waa in lagu barto inta lagu jiro xulashada: Waxaa jira laba dhinac oo kabniinka ah. Markaad xulaneyso, plywood waa inay lahaadaan hadhuudh saafi ah, siman oo siman hore, oo aan qallafsanayn, oo fidsan Plywood-ka waa ka xor yahay cilladaha sida waxyeellada, isku dhaca, haraaga cayayaanka, godka ciddiyaha safka, wadajirka dhintay, ...
CHANGYU-HW WOOD waa shirkad ku takhasustay naqshadeynta, soo saarista iyo soo saarista noocyo kala duwan oo plywood ah, filim soo wajahay plywood, LVL iyo wixii kale oo plywood ah. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida gudaha gudaha, sameynta alaabta guriga, qalabka dhismaha, sariirtaada, iyo shirkadaha kale ee la xiriira. Waxay kuxirantahay ...
Maxaynu u dooran karnaa Filimkeenna Fududeynta Plywood iyo LVL Scaffold Plank?
1, Filim soo wajahay plywood waa mid khafiif ah, adkaysi u leh daxalka iyo biyaha, si fudud loogu daro walxo kale isla markaana fudud in la nadiifiyo lana jaro. Ku daweynta filimka soo wajahay geesaha plywood-ka rinjiga biyuhu wuxuu ka dhigayaa mid aad u biyo-badan oo u adkaysta xirashada. Cimri dhererkeeda awgeed ...
Waa maxay Plywood Fasalka Furniture & Maxaad u dooratay plywood-keena?
Xawaarahayaga loogu talagalay alaabta guriga iyo naqshadeynta wuxuu bixiyaa waxqabadka farsamooyinka wanaagsan, xasilloonida cabbir aad u fiican iyo saadaalinta wanaagsan ee dusha sare lagu dhammeeyo rinjiga. Faa'iidooyinka wejiga iyo gadaasha: Dahaarka fanaaniinta waxaa lagu qeexaa "xaashi khafiif ah, goos goos ah, jarjaran, ama s ...
Qolka 6-135, Jushan Road, Donghu Street, Pizhou City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha